Turmaata waggaa 1 muummee ministiraa Dr Abiy – Fana Broadcasting Corporate
Turmaata waggaa 1 muummee ministiraa Dr Abiy
Finfinnee, Bitootessa 12,2011(FBC)- Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad baatii Bitootessaa bara darbee ture Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti argamuudhan waadaa biyya bulchuu kan seenan.
Yeroo muudama isaaniittis haasaa qalbii namoota hundaa hawwate taasisaniit turan.
Waadaa galanii baay’ee osoo hin tutturin waan waadaa galan hojiirra oolchuu yoo eegalan ammoo deeggarsaa fi dinqisiifannaa jabaa horachuu itti fufan.
Dirreen demokraasii biyyattii akka bal’atu, hoggansaa fi miseensonni paartilee siyaasaa hidhaadhaa gadhiifaman.
Qaamoleen hidhatanii socho’aa turanii fi baqatanii biyyoota alaarra turan biyya keessa galanii nagayaan akka qabsaa’an taasisan.
Araara Ityoophiyaa fi Eertiraa milkeessuu, daangaan waggoota 20f cufamee ture banuu, imbaasii biyyoota lammanii saaquu, lammiileen biyyoota lamaanii walgaafachuu eegaluu, dhaabbileen mootummaa gariin yookin guutummaadhan gara dhuunfaatti akka naanna’an taasisuun milkiirratti milkii gonfachuu itti fufan.
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad bu’aalee kanneenii fi kan biroo galmeessisanis, walitti bu’iinsi darbee darbee mudatuu fi buqqa’uun lammiileeakka rakkootti ka’uu mala.
Gargaaraan proofeesaraa federaaliizimii Haaylayyasuus Taayyeen lammiileen buqqa’uun, dhimmoota tokko tokkorratti ejjennoo ifa ta’e qabachuu dhabuun, garaagarteewwan ADWUI keessatti muul’atu sababoota hedduu akka rakkootti ka’an keessaa eeramuu malu jedhu.
Dooktar Abiy waa akkuma dubbatan, warri isaan waliin jiranis waan irratti waliigalame qixa hojiirra oolchuu qabu jedhan.
Kun akka milkaa’u ammoo muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad dhiibbaa gochuu qabu jedhan.
Barsiisaan Yuunvarsiitii Finfinnee fi qorataan Yuunvarsiitii Haarvaard obbo Aabbaay Yimar rakkoo baajataa furuu fi gufuuleen nu mudachuu malan maali jedhanii duursanii adda baasuun murteessadha jedhu.